कला/मनोरम Archives - Page2of 79 - Naya Pusta
Home > कला/मनोरम (Page 2)
पहिलो दिनमा कति कमायो अक्षयको ‘प्याडम्यान’ले ?
Naya Pusta February 10, 2018 कला/मनोरम
अक्षय कुमारको फिल्म ‘प्याडम्यान’को पहिलो दिन (शुक्रवार)को कमाइ औषतभन्दा बाहिर रह्यो। विहानको शोमा फिल्मले औषत कलेक्सन गरे पनि दिउँसो भने फिल्मकाे कलेक्सन बढ्न पुग्यो। पहिलो दिन प्याडमानले १० करोड २६ लाख भारतीय रुपैयाँ कलेक्सन गर्यो। फिल्मले भारतका ठूला शहरका मल्टिप्लेक्स हलमा राम्रो कमाइ गर्यो। साना शहरका सिंगल स्क्रिन हलमा भने अक्षयको
फेरी टेलिभिजन शोमा फर्किँदै कपिल शर्मा
एजेन्सी । हाँस्यकलाकार कपिल शर्माका केही समयको विश्रामपछि फेरि दर्शकलाई हँसाउन तयार भएका छन्। कपिल शर्मा छिट्टै सोनी टेलिभिजनको नयाँ शो मार्फत कमब्याक गर्दैछन्। सोनी टेलिभिजनले कपिलको नयाँ शोको प्रोमो सार्वजनिक गरेको छ। जसमा कपिल एक अटोमा बसेर अटो चालकलाई सोनी टिभीको कार्यालयसम्म जान भन्छन् तर बेरोजगार कपिललाई अटो चालकले त्यहाँसम्म
गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु, अफ-एयरमा सेक्सी ट्याटु खोपाउने, ब्रेकपछि छोप्ने !
Naya Pusta February 10, 2018 कला/मनोरम, विचित्र संसार
काठमाडौं, वसन्तपुरको काठमाडौं इन ट्याटु हाउसमा थोरै मुस्कुराउँदै छिरिन् । ट्याटुकारले सोधे, ‘कहाँ हान्ने?’ अलिकति लज्जाभावसहित उनले आफ्नो हात छातीतिर औँल्याइन् र भनिन्, ‘यहाँ अलरेडी ट्याटु छ, त्यसलाई अर्को ट्याटुले छोप्नुपर्यो ।’ किन छोप्न लागेको ? रिपोर्टिङका क्रममा रहेको संवाददाताले जिज्ञासा राख्यो । उनले हाँसीहाँसी जवाफ फर्काइन्, ‘यहाँ ब्वाइफ्रेन्डको नाम छ । ऊसँग
महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या
Naya Pusta February 9, 2018 February 9, 2018 कला/मनोरम
मुम्बई । भारतीय सिने उद्योग बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना भएका छन्। अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पछि अमिताभलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अमिताभलाई भारतको मुम्बईस्थित लीलावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनको स्वास्थ्यस्थित कस्तो छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आउन सकेको छैन। अस्पतालमा अमिताभका सबै आफन्त जम्मा भएका छन्। उनका शुभचिन्तक
मानव तस्करीको आरोपमा कलाकार राजेन्द्र खड्गी पक्राउ
Naya Pusta February 8, 2018 Special News, कला/मनोरम
काठमाडौं, २५ माघ । चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । खड्गीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले बिहीवार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ लगत्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको सिआईबीले जनाएको छ। अदालतले पाँच दिन थुनामा राखि खड्कीमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ। विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नेपाली
नेपाल आउन लागेका सलमान खानले लेखे फेसबुकमा यस्तो स्टाटस
Naya Pusta February 7, 2018 कला/मनोरम
‘दबंग ब्वाई’ सलमान खान नेपाल टुरका लागि उत्साहित भएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत ‘दवंग द टुर नेपाल’को पोस्टरसहित त्यस्तै स्टाटस लेखेका छन् । केही समयअघि मात्र उनले ‘नेपाल अब हाम्रो स्वागत गर्ने होइन ?’ आशयको स्टाटस लेखेपछि त्यसमा कमेन्टको ओइरो लागेको छ । यसो भन्दै, ‘वेलकम टु नेपाल ।’ उनी
आलिया भट्टले यही वर्ष बिहे गर्ने सम्भावना, को हुन् भाग्यमानी केटा ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले सन् २०१८ मा बिहे गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। उनले रणवीर कपूरसँग बिहे गर्ने हल्ला चलेको हो । डिजाइनर मनीष मल्होत्राले यसको खुलासा गरेका हुन्। नेहा धूपियाले चलाउने टीभी टक शोमा मनीषले यो कुरा बताएका हुन् । टक शोमा नेहाले मनीषलाई सन् २०१८ मा कुन
अन्तत: सुटुक्क विवाह बन्धनमा बाँधिए दीपक-दीपा (भिडियो सहित)
Naya Pusta February 7, 2018 February 7, 2018 कला/मनोरम
काठमाडौँ । हाँस्य कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला अभिनित सामाजिक चलचित्र ‘हुन्नरी’ सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे चेतना जगाउन निर्माण गरिएको चलचित्रमा दीपक र दीपा प्रेमीप्रमीकाको रुपमा देखिएका छन्। शारिरीक रुपले अशक्त सोझो गाउँले केटाको भुमिकामा दीपकले अभिनय गरेका छन् भने दीपा, विधवा महिलाको भुमिका देखिएकी छिन् ।
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’ सँग डाबर नेपालको साझेदारी
Naya Pusta February 5, 2018 कला/मनोरम
काठमाडौं, २२ माघ । डाबर नेपाल प्रालिको प्रोस्टाइलले नेपाली चलचित्र ‘कृ’सँग साझेदारी गरेको छ। राजधानीमा डाबर नेपाल प्रालिले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली चलचित्र ‘कृ’लाई औपचारिक स्टाइल पार्टनर बनाएको घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा ‘अनमोल फ्यान मोमेन्ट्स’का १० जना विजेतालाई ‘कृ’को टिकट पनि प्रदान गरिएको थियो। फेसबुक पेजमा सबैभन्दा बढी लाइक प्राप्त गर्ने सहभागीले
धुर्मुस-सुन्तलीले भोलि ४७ वटा घर हस्तान्तरण गर्दै, यस्तो छ तयारी
Naya Pusta February 5, 2018 कला/मनोरम, पदेश नम्बर २
रौतहट, २२ माघ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा निर्मित सन्तपुर एकीकृत नमूना बस्ती हस्तान्तरण गरिने भएको छ। कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)को पहलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ८ सन्तपुरमा बाढीपीडित दलित परिवारका लागि निर्माण गरिएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुविधा सम्पन्न ४७ वटा घर निर्माण भइसकेकाले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्न
२०७४ फाल्गुन ०६ देखि १२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
देउवाका यी निर्णय उल्टाउँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली
हेलिकप्टर दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु
परीक्षामा ओलीका योजना : रेलदेखि ग्यास पाइप लाइनसम्म
अवकाशभन्दा समायोजनमै रुचि : १९ सयले मात्र दिए निवेदन
‘सहअध्यक्षको सूत्रमा एमाले-माओवादी एकता नजिक’
बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा कडाइ गर्न माग
आजको राशिफल – मिति २०७४ फाल्गुन ०६ गते तृतीया तिथि आईतबार